Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mamatonalina manatona fiaramanidina: Iza no hanjary voatavo?
Peter Harbison ao amin'ny seranam-piaramanidina COVID-19
Fampisehoana nataon'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Ivotoerana misidina ho an'ny fiaramanidina CAPA, Peter Harbison, nantsoina hoe “Fanatonana amin'ny Mamatonalina: Iza no Hanjary voatavo?” dia tantaran'ny fanantenana sy delestazy ary fanantenana hafa indray.
Na eo aza ny fihenan-tsetroka noho ny COVID, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia nanana tondra-drivotra mahery vaika, saingy hahita ny hazavany amin'ny faran'ny tonelina ve ny sehatra?
Ny fitsangatsanganana orinasa dia hijanona ambany ambany ary manimba ny maodelin'ny seranam-piaramanidina feno.
Na dia nandoa karama aza ny fanampiana ara-toekarena ankapobeny an'ny governemanta, dia mila fanampiana bebe kokoa avy amin'ny governemanta.
Vakio, na mipetraha ary mihaino - ity lahateny mahaliana amin'ny hoavin'ny post aviation COVID-19 ity. Peter Harbison, CAPA Center for Aviation Executive chairman, mizara ny fomba fijeriny manam-pahaizana. Manomboka izy:
Manantena aho fa mandritra io dia ho azonao ny zavatra resahiko eto - hevitra lehibe am-polony. Ny voalohany dia manomboka manaikitra ny zava-misy amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity satria manohana ny fahamainana ny governemanta, satria mila manomboka miditra ny vola. Raha ny marina, manakaiky ny teboka vaovao isika. Ny manaraka dia, tena mahita ny hazavana any amin'ny faran'ny tionelina ve isika? Avy eo kely momba fitsangatsanganana amin'ny raharaham-barotra, ny fomba manimba ny maodelin'ny seranam-piaramanidina feno amin'ny fahaverezan'ny ampahany lehibe aminy. dia aiza ny governemanta rehefa mila azy ireo ianao? Tsara fanontaniana. Kely momba ny ady amin'ny jab, ny fizotry ny vaksiny. Avy eo te-hamita ny torolàlana momba ny indostria ho avy aho rehefa mahita azy ireo, sary vitsivitsy.
Ka, mandraka ankehitriny, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia nankafy tailwinds matanjaka be izay nanampy azy ireo hijanona ho ranon-javatra nandritra ny taona lasa, na dia teo aza ny fisondrotana goavambe sy goavana eo amin'ny tsena. Saingy mazava ho azy, nandritra izany fotoana izany dia niharatsy be ny mombamomba ny trosan'izy ireo. Nandoa karama ny fanampiana ara-toekarena ankapobeny an'ny governemanta. Firenena maro no nanome indram-bola sy / na nahazo fananam-bola amin'ny kaompaniam-pitanterany, soa ihany, amin'ny resaka tailwinds. Soa ihany fa matanjaka ny tsenambola. Noho izany, azo atao ihany koa ny mampiakatra fitoviana. Ny sanda fananana dia nijanona ho avo, ka azo natao ny nanangona trosa.
Matetika, ireo mpampindram-bola nahazo famatsiam-bola dia malala-tanana tamin'ny fanampiana ireo zotram-piaramanidina hijanona ambony. Ary, mazava ho azy, ny tahan'ny zanabola dia ambany dia tokana ary toy ny mijanona maharitra toy izany mandritra ny fotoana maharitra. Vokatr'izany dia vitsy ny sidina an'habakabaka nianjera. Misy ny lisitr'izy ireo, fa ny nahagaga tamin'ny taona dia ny tsy firy no nianjera, fa firy no tsy nianjera. Taona nahatsiravina fotsiny io. Ny fahaiza-manao iraisam-pirenena dia nidina hatramin'ny faha-10 tamin'ny ambaratonga teo aloha ary maro ny hetsika an-trano tsy dia nahomby tamin'ny volana febroary, martsa 2020 hatramin'ny taona sisa. Saingy tamin'izany fotoana izany dia nisy zotram-piaramanidina vaovao niditra tao amin'ny tsena.
Ka efa ho antsasaky ny antsasaky ny taona vaovao izao isika izao ary mbola mikatso hatrany ny raharaha. Inona no hitranga manaraka? Ny fanohanana ara-toekarena ankapobeny an'ny governemanta dia hitohy hatramin'ny faran'ny telovolana faharoa, angamba bebe kokoa any Etazonia miankina amin'ny zava-mitranga ao amin'ny Kaongresy. Ny fidiram-bolan'ny sidina, mandritra izany, dia mety hijanona ho tsy mihetsika, ary mitohy ny fandoroana vola, amin'ny taha-tahotra izay mampatahotra. Manatsara ny fihetseham-pon'ny mpanjifa ary manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny fahafatesana sy tranga vaovao ny fanolorana vaksinina, antenaina. Fa ny fikorianan'ny vola izao dia manakiana. Manakaiky ny teboka farany isika. Tsy afaka mitohy mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fandoroana vola. Ka, tsy maintsy manomboka mavitrika ny zotram-piaramanidina fa tsy mandoro fotsiny ny fanaka hanafana ny tenany. Amin'izay fotoana izay dia tsy ho paikady ampy ny fanantenana. Efa ho sasakalina izao.
Ka inona no tsy itovizan'ny zavatra amin'ny telovolana faharoa? Voalohany indrindra, rehefa vonoina ny paompy fanampiana ny governemanta, tsena iza no hanao tsara indrindra? Ny vaksiny dia manatsara ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny ankapobeny, indrindra any Etazonia, UK ary any Israel, mazava ho azy, izay tena haingana tokoa ny nifindra, ary angamba i Chine, fa ny tena zava-dehibe, tsy manerantany. Ny fitsangatsanganana orinasa dia hijanona ambany ambany. Ny fahaiza-manao iraisam-pirenena dia mbola mijanona eo ambanin'ny 10% amin'ny ambaratongam-pandemika mialoha, ary sisintany maro no mikatona tsara. Saingy ny amerikanina ao an-toerana sy i Shina ao an-toerana dia tokony haneho fambara fanatsarana somary tsara.
Andao jerena aloha ny Eropa. Herinandro vitsivitsy monja sisa dia ho vita ny famandrihana amin'ny telovolana faharoa, izay vanim-potoana lehibe ho an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana, dia mbola mizarazara sy tsy voarindra ny valin'ny governemanta, miadana sy tsy milamina ny fandrosoan'ny vaksiny, ary horesahiko kely kokoa izany avy eo. Tara ny famandrihan'ny mpandeha ary tsy sahy misidina iraisam-pirenena izy ireo izao rehefa mety ho voan'ny quarantine na fanafoanana sidina izy ireo. Ny Eurocontrol, izay mandrakotra an'i Eoropa midadasika, dia manome sosokevitra fa hijanona ho ambany hatrany ny hetsika mandra-pahatongan'ny telovolana voalohany ary vao manomboka miakatra moramora amin'ny volana aprily sy mey amin'ity taona ity.
Mandritra izany fotoana izany, ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina eropeana dia manohy manimba ny ambin'izao tontolo izao. Nihena 56% ny Moyen Orient. Nihena 50% i Afrika. Nidina 48% i Amerika Avaratra, 45% i Azia Pasifika ary 42% i Amerika Latina. Ny tahan'ny seza any Eropa dia nidina 74%. Na ireo LCC any Eropa aza, izay mazàna manerantany dia nahavita zavatra tsara kokoa, dia manomboka manao azy mafy. Nanafaingana ny fidinan'izy ireo tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2020, easyJet indrindra satria noho ny antony maro samihafa dia tsy nanitatra ny fahaizany izy ireo. Saingy io fihenan'ny ankapobeny io ho an'ny LCC heveriko fa tena zava-dehibe, Wizz sy Ryanair manokana. Mila vola ampahefatry ny volana voalohany ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Eropa. Ho tonga ara-potoana ve izy io? Mety tsy izany. Ny famolavolana vaksinin'ny UK dia toa tsara, saingy fohy loatra ny fotoana mba hiteraka fahatokisan'ny besinimaro na hanomezana finiavana ny governemanta hanokatra ny sisintaniny. Noho izany, ny fivarotana any an-tsena alohan'ny Paska any Eropa dia ho be pitsiny. Misy tabilao be fanantenana be eto amin'ny The New York Times izay milaza fa ny vaksinina dia mety hampihena ny valanaretina UK mandritra ny herinandro, mijery ny olona rehetra voasaron'ny faran'ny volana jona, izay fomba fiasa be fanantenana, ary angamba tsy tena fantatsika ao ireo toe-javatra ireo hanao ahoana izany. Etsy ankilany, ny Financial Times tamin'ny herinandro lasa dia nanolo-kevitra fa ny manampahefana ara-pahasalamana dia nilaza fa misy karazany telo hafa ny viriosy miely any Angletera miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro izay inoana fa manimba ny fiarovana ny hery fiarovana natolotry ny aretina taloha sy ireo vaksinim-paritra ankehitriny. Ka tsy vaovao tsara izany.
Any UK, IHME, izay tena marim-pototra tamin'ireo vinavinany nandritra ny 12 volana lasa izay, tetikasa indray, miakatra sy manafaingana ny fahafatesan'ny olona any UK hatramin'ny 170,000 amin'ny faran'ny volana Mey, izay miharihary fa misy vokany ny birao amin'ny resaka fahatsapana ny governemanta sy ny mpanjifa. Espana izay miankina betsaka amin'ny fitomboan'ny fizahantany indray dia vinavinaina ho hihombo amin'ny volana febroary martsa hatramin'ny volana aprily raha resaka fahafatesa. Tsy famantarana tsara. Any Frantsa, ny làlan-kizorana koa dia miakatra mankany ambony. Ka izany rehetra izany dia famantarana rehetra manasarotra ny fahitana ny fomba ahafahan'ny Eropa mamerina amin'ny laoniny haingana.
Nolazaiko teo aloha fa ny sidina an-trano any Etazonia dia tokony hiverina aloha, ary mahaliana noho ny antony maro. Voalohany indrindra, misy tsy fitoviana lehibe eo amin'ny fihetsik'i Etazonia sy ny ankamaroan'ny firenena mandroso amin'ny fizotrany manontolo ary izany dia noho ny antony maro samihafa. Firenena tsy manam-paharoa amin'ny lafiny maro. Ny fahafaha-mizaka ny fahafatesan'olona efa ho 4,000 isan'andro dia tena zavatra izay tsy vonona ny hanao ny ankamaroan'ny governemanta. Ampifanohero amin'i Shina, izay tena nihanaka tokoa ny valanaretina voalohany, ary efa nihatsara izy ireo ary voafehy ny zavatra. Ny fameperana ny fivezivezena dia tena mihombo isaky ny misy valanaretina vaovao, ary hiresaka kelikely momba izany aho ao anatin'ny fotoana fohy. Vokatr'izany dingana izany sy ny fihetsika tany am-boalohany ary ny hetsika natao hampihemorana ny fitomboana, ny dia an-trano any Shina dia mitovy amin'ny haavony taloha-Covid. Raha 50% eo kosa ny Etazonia. Saingy ny firenena roa tonta dia manao teti-dratsy fanarenana haingana satria mihodina ny vaksininy.
Ankehitriny, ireo sary ireo raha ny marina dia mety ho tantara iray alina. Voalohany indrindra, mahaliana fa ny tsena roa dia mitovy amin'ny habe azo ampitahaina. Ireo kisary ireo dia mampiseho amin'ny mena ny làlan'ny fahaiza-manao amin'ny taona 2020, ary hitanao fa nitotongana haingana be i Shina tamin'ny faran'ny volana febroary satria nahena ny fahafaha-miasa ary vao nikatona ny fanidiana ny tsena. Etazonia kosa dia tamin'ny martsa lasa teo talohan'ny nanidiana ny raharaha tany. Ny tsipika mena eo an-tampony, izay mampiseho valiny miadana kokoa ary amin'ny lafiny maro, voalaza fa nanova ny fomba fiasa amerikanina manontolo.
Ny tsipika maintso tototry sy ny tsipika maitso matevina, ny tsipika maitso matevina dia mampiseho ny toerana misy antsika amin'ny 2021. Ny fiverenan'i Shina momba ny haavo 2019. Fa ny tena mahaliana dia ity dia fotoana lehibe amin'ny taona. Ny taom-baovao sinoa, ny taom-baovao dia fotoam-pitetezana lehibe ary nisy fameperana lehibe amin'ny fivezivezena mba hanamaivanana ny valanaretina. Saingy ny tsipika feno teboka dia aza raharahianao ny fidinan'ny Sinoa aorian'ny tapaky ny volana martsa hatramin'ny faran'ny volana martsa satria olana fotsiny ny fametrahana filaharana. Saingy araka ny ahitanao azy, i Etazonia sy i Shina dia samy mijery fanantenana be hatrany amin'ny faran'ny volana ity. Nandeha hatramin'ny 15 tapitrisa ny mpandeha amerikanina, seza 15 tapitrisa fa tamin'ny faran'ny volana martsa sy China dia mety ho roa tapitrisa angamba.
Vaksinin'ny COVAX voalohany any Afrika: Rariny sy ara-drariny?